Wadaad Dalka Kenya u Dhashay oo la Dilay
Monday, May 20, 2013 Wakhtiga Geeska Afrika 23:28
Dablay aan heybtooda la aqoonsan ayaa dilay wadaad Muslim ah oo dalka Kenya u dhashay, kaas oo lagu eedeeyey inuu taageeri jiray ururka Alshabab ee Somalia.
Booliiska Kenya ayaa Isniintii maanta sheegay in Aboud Rogo Mohammed lagu toogtay magaalada dekedda leh ee Mombasa. Wararku waxay sheegayaan in dabley aan la aqoonsan ay wadaadka weerareen isaga oo gaari wada, isla markaana ay la socdaan xaaskiisii iyo qoyskiisii.
Aboud Rogo Maxamed waxa bishii hore lagu daray liiska cunaqabateynta ee Maraykanka, iyada loo lagu eedeeyey inuu dagaalyahanno u qori jiray, isla markaana lacag u uruurin jiray kooxda Alshabab.
Golaha Ammaanka ee QM ayaa dhinaciisa wadaadka kusoo rogay xayiraad dhinaca socdaalka ah iyo hantidiisii oo la xanibay, iyada oo Golaha Ammaanku sheegay in urur uu madax u ahaa oo la yiraahdo Al-Hijra uu Aboud Rogo u adeegsan jiray si dadka luuqadda Sawaaxiliga ku hadla ee Afrikaanka ah uu ciidan ahaan ugu qoro kooxda Alshabab.